Shariifka “Muddo kororsi waxay keenaysa in dib loogu laabto dariiqii xumaa” | Dhacdo
Home Wararka Maanta Shariifka “Muddo kororsi waxay keenaysa in dib loogu laabto dariiqii xumaa”
Shariifka “Muddo kororsi waxay keenaysa in dib loogu laabto dariiqii xumaa”
Madaxweynihii hore ee dalka, Shariif Sheekh Axmed ayaa ka digay isku day kasta, oo Dowladda Federaalka ay ku sameynayso muddo kordhin sharci darro ah, haddii uu muddo xileedka ka dhamamaday Madaxtooyada iyo Baarlamaanka.
Shariif Sheekh Axmed ayaa nasiib-darro ku tilmaamay, iyadoo ay maanta ku beegan tahay aasaaska Ciidanka Xoogga Dalka inay Villa Somalia xusul-duub ugu jirto in ay awoodda ciidanka ugu adeegsato muddo kordhin, taasoo keenaysa buu yiri in dib loogu laabto dariiqii xumaa ee laga yimid.
“Waxaan ka digeynaa isku day kasta oo lagu doonayo muddo kordhin sharci darro ah, maadaama waqtigii uu ka dhacay Madaxweynaha, Goleyaasha Sharci-dejinta ee Dowladda Dhexe.” Ayuu yiri Shariif Sheekh Axmed, Madaxweynihii hore ee Somaliya.
Madaxweynihii hore ayaa yiri “Waxaa kaloo nasiib-darra ah, iyadoo ay ku beegan tahay munaasabadda Ciidanka Xoogga Dalka ee 12-ka April in Madaxtooyadu isku daydo in ay ku boobto awoodda ciidanka muddo kordhin aan sharci ahayn, taasoo keenaysa in dib loogu laabto dariiqii xumaa ee laga yimid.”
Shariif Sheekh Axmed ayaa qiyaano qaran ku tilmaamay, iyadoo laga heshiin karo arrimaha doorashooyinka ee dalka in ay maanta dowladdu isku daydo muddo kororsi.
“Waxaan aaminsanahay inay tahay qiyaano qaran in iyadoo doorashada laga heshiin karay, oo ay dowladdu dayacday in maanta la isku dayo muddo kororsi, waxaana leenahay hoggaanka dowladda waqtigeedu dhamaaday waad ambateenee soo noqda, oo Somaliya ha u horseedina inay dib ugu laabato wixii laga yimid.” Ayuu yiri Shariif Sheekh Axmed.
Waxa kaloo uu yiri “Dalkan ma qaadi karo xil kordhin iyo boob doorasho, dhaqaale ahaan, siyaasad ahaan iyo amni ahaanba, waa dal dowladnimadiisa weli ay curdan tahay, oo u baahan in laga fikiro cawaaqibka xun ee ka dhalan kara talaabooyinka aan ka fiirsashada lahayn ee madaxdii hore ay ku dhaqaaqayaan.”
Shariifka ayaa hoosta ka xariiqay cawaaqibka ka dhasha muddo kororsigaasi inay ku keli noqon doonaan Madaxda Dowladda Federaalka, oo uu ku eedeeyay kuwo ku fashilmay waajibaadkii loo igmaday.
“Waxaan leenahay ummadda Soomaaliyeed, maamulada xubnaha ka ah Dowladda Dhexe iyo Beesha Caalamkuba ha ogaadeen wixii ka dhasha muddo kororsigaas in aan lala wadaagi doonin Madaxdii hore ee ku fashilantay dowladnimadii lagu aaminay.” Ayuu yiri Shariif Sheekh Axmed.
Dowladda Federaalka ayaa Arbacadii sheegtay inay guuldareysteen dadaaladii xalka loogu raadinayay arrimaha doorashooyinka ee dalka, iyadoona eedda dusha kaga tuurtay Madaxda Jubbaland iyo Puntland.
Previous articleLafta-gareen oo dib ugu laabtay Magaalada Baydhabo (SAWIRRO)
Next articleRooble “Sharaf ayay ii tahay in aan qaabilay, waqtina la qaatay Aadan Maxamed Cali”